Home > Programme mpiara-miasa mpiray finoana
Ny programa Affiliate dia fotoana lehibe ahazoanao vola amin'ny fivarotana ireo vokatra rindrambaiko fanarenana data azonay nahazo loka. Miarahaba antsika rehetra, manomboka amin'ny olona, ​​orinasa kely ka hatramin'ny magazine, vavahady ary fivarotana.
DataNumen programa afiliana no tsara indrindra. Nahoana?
Komisiona avo, rafitra isan-jato malefaka.
Isaky ny varotra vokarinao dia mahazo tsy latsaky ny 20% amin'ny totalin'ny varotra ianao. Mitombo ny komisiona arakaraka ny zava-bitanao! Ny habetsaky ny varotra avo indrindra amin'ny vokatra fanarenana angon-drakitra dia, vao mainka ho isan-jato ny isan-jato.
Afaka manao fampielezan-kevitra amin'ny fiaraha-miasa miaraka aminao izahay. Misy ny vidiny manokana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka, ary koa ny fihenam-bidy betsaka, ny varotra fialantsasatra, ny mailaka mivantana ary maro hafa. Azonao atao foana ny mangataka fangatahana fitaovana dokam-barotra na inona na inona karazany. Azonao atao ihany koa ny miantehitra amin'ny fiakaran'ny isan-jaton'ny komisiona rehefa mandamina vaovao postfanentanana, fampielezan-kevitra amin'ny doka, ary hetsika marketing. Indraindray aza dia omentsika vola ampahany amin'izany hetsika izany. Manana hevitra ve ianao? Mifandraisa aminay!
Izay fanontaniana, tolo-kevitra ary fangatahana dia hojerena ary hahazo valiny tsara ianao amin'ny fotoana fohy indrindra. Azafady, ampiasao ny antontan-taratasinay mba hametrahana fanontaniana na hanaovana fangatahana momba ny programa afiliana.
Aorian'ny fisoratanao anarana miaraka amin'ny programa Affiliate dia hanome adiresy ID anao izahay.
Amin'ny alàlan'ity ID mpiara-miasa ity dia afaka mamorona rohy fandaminana tsy manam-paharoa ianao ho an'ny iray amin'ny vokatray. Raha mividy amin'ny alàlan'ity rohy fandefasana baiko tokana ity ny mpanjifanao dia ho hitanay ny fanomezanao azy ary omena anao ny komisiona.
Amin'ny alàlan'ity ID mpiara-miasa ity dia afaka mamorona rohy tokana amin'ny pejin-tranonkala amin'ny tranokalanay koa ianao. Raha mitsidika ny pejin-tranonkala amin'ny alàlan'ity rohy tsy manam-paharoa ity ny mpanjifanao dia voatahiry ao anaty solosainy ny cookie miaraka amina ID anao apetraka ao aminy. Avy eo, raha mividy ny vokatray amin'ny fotoana manaraka ny mpanjifa dia ho fantatra ny cookie ary hatolotra anao ny komisiona. Ny cookie dia manan-kery mandritra ny 6 volana ka raha mbola manapa-kevitra amin'ny mpanjifa ny mpanjifa ao anatin'ny 6 volana hatramin'ny nitsidihany voalohany ny pejinay web, dia hahazo ny komisiona amin'ny fividianany ianao.
Makà starTed izao
Ny programa afiliera dia tantanan'i MyCommerce.com ary FastSpring.com, samy mpitarika miorina amin'ny programa programa Affiliate. Azonao atao ny misafidy ilay iray mifanaraka amin'ny safidinao. Ny programa afiliana dia mora tokoa. Tsy misy miafina costs ary izany dia maimaim-poana to sign up.
Soraty ny programa Affiliate MyCommerce.com
Soraty ny programa Affiliate FastSpring.com
Aorian'ny fisoratana anarana dia handefa anao mailaka misy ny ID sy ny torolàlana ho an'ny s ianaotart mba hahazoanao vola avy hatrany!
Raha efa manana kaonty Affiliate ao amin'ny MyCommerce.com na FastSpring.com ianao dia azafady miditra ao amin'ny tontonana fanaraha-maso anao ary tadiavo izahay hanatevin-daharana sy starT. Ny ID mpivarotra anay dia 39118 ao amin'ny MyCommerce.com ary datanumen ao amin'ny FastSpring.com.